WR Rust Hack 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
WR Rust kugula
Ukufumana ukufikelela kwimfumba yobu bukhulu akuqhelekanga ngokulula. Xa usebenzisa iRust WR, akukho mntu uya kuba nakho ukunqanda.
Akukho sidingo sokuzibophelela ixesha elide (okwangoku!) -Ukuthenga isitshixo semveliso seentsuku ezi-1 namhlanje!
Yiza ubone ukuba kutheni abasebenzisi bethu bengayi naphi na kwiRust hacks-Thenga isitshixo seMveliso yeveki enye-namhlanje!
Ngabachasi abazinikeleyo kuphela abaya kulawula kwiRust-Thenga isitshixo seMveliso yenyanga enye namhlanje!
Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye ubone ukuba kutheni abantu abaninzi bethandana neRust WR! Dlala ngobundlongondlongo kunye nokuchaneka usebenzisa iRust WR namhlanje.
Ulwazi lweRust WR
Umhlwa akufuneki ube ngumdlalo apho usila nje kude kwaye uzama ukuqokelela izixhobo, kodwa ekuphela kwendlela onokuthi wenze ngayo kukurhweba kwethu iRust WR! Iphuhlisiwe ukuze isetyenziswe kwi Windows 10 iinkqubo, le hack ixhasa zombini ii-Intel kunye nee-CPU ze-AMD. Ayibandakanyi ukubonwa kwe-HWID, kodwa unokuhlala uthenga enye eyongezelelweyo kwi-GamePron. Azikho ezininzi iiRust hacks ezakhelweyo ukunceda abasebenzisi abajonge ukukopela okokuqala, kodwa esi sixhobo sichanekile njengoko unokufumana.
Akukho mntu uya kuphinda akusizele ngeRust WR, njengoko kubandakanya zombini iRust aimbot kunye neRust ESP / Wallhack ukukugcina uphaphile kwaye uphila ngamaxesha onke. Awusoze uphulukane nempango yakho, njengoko uya kuba nakho ukuyalela isantya sedabi usebenzisa i-FOV Circle ehlengahlengisiweyo kunye nokuBekwa phambili kwamathambo!
Utshaba i-ESP (amathambo, ibhokisi)
Ulwazi lutshaba (igama, umntu oleleyo, impilo, ukujonga iqela, ofileyo, umgama, isazinzulu)
Ukuphanga i-ESP (izithuthi, ukuqokelelwa, iindawo, iikreyiti, imiphanda, ukuhla kokuhambisa, izilwanyana, njl.
Iimpawu eziCwangciswe ngokuPhezulu
Malunga nerust WR
Ukuba uyathandabuza malunga nokutsiba kwihlabathi le-hacks kuqala, ungakhathazeki, siyaqonda ukuba uvela phi. I-GamePron yenze ukuba kube lula ngokulula ukungena kwinkqubo yokuqhekeza ngazo zonke izixhobo zethu, kwaye iRust WR ayifani tu kuloo meko! Ungasasaza nayo yenziwe njengobungqina bemifudlana, nangona unokufuna ukuqaphela ukuba uKhuselo lukhubazekile (ke ubuqhetseba abuphawulwanga ngobuxoki). Awuyi kudlala imidlalo yakho kwimodi yefestile kunye nokukhohlisa nokuba, njengoko unesisombululo esigcweleyo sesikrini esikhoyo nangona ukukopela kusebenza.
Kutheni usebenzisa iRust WR ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli abanandaba nabasebenzisi babo njengoko i-GamePron isenza. Isengavakala ngathi iyinto nje, kodwa sizama ukuzisa ezona hacks zinokwenzeka kuthi kubathengi bethu- nokuba yeyomhlwa okanye enye yemidlalo oyithandayo, kuya kuhlala kukho isixhobo kuwe apha kwi-GamePron. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa zonke izixhobo zethu zikhuselekile kwi-100% kwaye ayizukukhokelela ekubeni iiakhawunti zakho zivinjelwe! Ungazisebenzisa kubalo lwakho lwantlandlolo ngaphandle kononophelo emhlabeni, kuba akukho nto ikumisayo xa usebenzisa iRust WR.
Imenyu yethu yomdlalo weqonga sisixhobo esisebenzayo esihlala sityeshelwa ngabasebenzisi be-novice, nanjengoko nawuphi na umkhwebi onamava sele eyazi indlela ekubaluleke ngayo. Awusoze ufune ukujonga kwimenyu yomdlalo njenge "sixhobo sesibini", njengoko iRust WR ikunika amandla okulungelelanisa useto lwakho lokuqhekeka nanini na ungathanda. Akukho sidingo sokuvala usetyenziso xa ufuna ukwenza utshintsho, ungakwenza oko ngelixa udlala kwaye uhlale ngaphakathi komdlalo! Guqula ngokukhawuleza ukuba iAimbot isabele njani, okanye nokuba yintoni na ofuna ukuyibona notshaba lwe-ESP-ukhetho lolwakho!
Ukuthenga ukukhwabanisa kweRust apha kwiGamePron. Zonke izinto eziphambili ezinokubakho zibandakanyiwe!
Ilindelwe Lawula kunye nomhlwa wethu WR kugula?